Bitrix24: A Switzerland Army Knife maka Enterprise mmekota | Martech Zone
Bitrix24: Otu ndị agha Switzerland maka ndị ọrụ mmekọrịta
Sunday, June 14, 2015 Satọde, 13 Juun 2015 Douglas Karr
Ndị otu azụmaahịa anaghị abụkarị otu ndị na-adịghị ahụkebe nke ndị na-ere ahịa n'ime, ihe ndị na-ahụ maka mpụga, na ndị nweere onwe ha nwere ike na-arụ ọrụ site n'ọfịs n'akụkụ ụwa niile. Anyị enweela ọtụtụ nyiwe nke nyeere aka na nke a - site na ịntanetị na-akọrọ ihe ntanetị, ntanetị ntanetị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, kalenda ndị ọzọ, na ndị ọzọ… yana ọtụtụ ngwaọrụ nwere njikọta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ndị otu ọ bụla na-adị ka anụ ọhịa ahụ. Frankenstein kama ijikọta ọnụ.
10% kwụsịrị ndebanye aha Bitrix24 kwa afọ
Bitrix24 awade zuru ezu nke na-elekọta mmadụ mmekota, nkwukọrịta na management ngwaọrụ maka òtù. A bụ ihe nnyocha video:
Ihe Bitrix24 gụnyere
Netwọk mmekọrịta - Netwọk mmekọrịta dị n'ime na-ahapụ gị imekọrịta ihe dị mfe, ọsọ na ịrụ ọrụ nke ọma. Nweta nzaghachi ozugbo, kekọrịta echiche, mepụta otu ọrụ ma mee ndị ọrụ gị.
Ihe aga-eme na oru ngo - Site na ToDos nkeonwe na ọrụ dị mfe na ọrụ dị mgbagwoju anya.
Otu nkata na vidiyo - Ngwa ngwa nkwukọrịta site na nnọkọ vidiyo gaa na nkata otu.
Nchịkọta akwụkwọ - Chekwaa dọkụmentị ederede dị n'ịntanetị, edezi ọtụtụ ndị ọrụ na ntanetị yana ihu ọma akwụkwọ arụ ọrụ. Soro ndị ọrụ ibe gị kerịta faịlụ na folda dị mfe, ma nweta data gị na ngwaọrụ ọ bụla.
Kalịnda na atụmatụ - Kpọọ ndị ọrụ ibe gị ka ha gaa nzukọ, hazie ndị ahịa ozugbo site na CRM, mepụta kalenda nkeonwe ma kesara onwe gị, ndị otu ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ niile.
email - Nweta email ozugbo na akaụntụ Bitrix24 gị.
CRM na Ahịa otu njikwa - Site ahịa nchekwa data email ahịa na akpaka ụzọ ọrụ.
Ekwentị - Kpọọ ndị ahịa gị na ndị ọrụ ibe gị oku site na ọnụ ụzọ gị site na iji otu pịa. Banye ma dekọọ oku ekwentị ozugbo n'ime CRM. Nwere ike iji Bitrix24 dị ka ebe mebere oku.
Nchịkọta Ọrụ Ndị Mmadụ - Akwụkwọ ndekọ ndị ọrụ, eserese enweghị, ụzọ ọrụ onwe onye, ​​njikwa oge, akụkọ ọrụ, isi ihe ọmụma na 20 + ngwaọrụ HR ndị ọzọ.
mobile - ọ na-arụ ọrụ na iPhone gị, iPad ma ọ bụ gam akporo kwa. Nwere ike were akaụntụ Bitrix24 gị na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba ọ ga-abụ naanị otu mgbata.
Ọzọ - eLearning, helpdesk, njikwa ndekọ, Pulse Companylọ ọrụ, Bitrix24.net, Ahịa, API na ọbụna usoro njikwa ọdịnaya.
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọta na post a na-enye 10% kwụsịrị ndebanye aha kwa afọ nke Bitrix24.
Tags: Ugboro abụọkalendaCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịahrndị ọrụ nchịkwa mmadụnetwọkụ mmekọrịtamobile mmekotaatụmatụnjikwa ọrụnjikwa ọrụ
Bido na ule A / B site na ihe asaa a
Etu esi etinye aka na Email na-atụnyere mmekọrịta mmekọrịta